कंगना रनावत भर्सेस् महाराष्ट्र सरकारः विवादको चुरो कुरा के हो ?
scheduleबुधवार कार्तिक १२ गते, २०७७
मुम्बई, २१ भदौ । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत यतिखेर भारतीय सञ्चार माध्यमा चर्चाको शिखरमा छन् । कारण हो उनको केही अभिव्यक्तिमाथि महाराष्ट्र सरकारका गृहमन्त्री अनिल देशमुख र शिव सेना नेता तथा राज्यसभा सदस्य सञ्जय राउतको तितो प्रतिक्रिया ।
महाराष्ट्रमा पछिल्ला केही महिना यता हत्या-हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । गत जुलाईमा पल्हर जिल्लाको गडचिनचल्ले गाउँमा बस्ने साधुहरुले खेतमा काम गर्न गएका बालबालिका अपहरण गरी मृगौला निकाली हत्या गर्ने गरेको हल्ला चलेपछि गाउँलेहरुको समूहले तीनमध्ये दुईको ढुङ्गामुडा गर्दै मारेका थिए ।
ती निर्दोष साधुहरु थिए । तर, पुलिस यो घटनालाई रोक्न असफल भएको थियो । गाउँलेहरुको भीडले उल्टै पुलिसलाई कुटेका थिए । केही प्रहरी आफैं घाइते भएका थिए । यो घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि पुलिसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
यही सन्दर्भमा कंगनाले एक ट्वीट गरेकी थिइन्– ‘म मुम्बईमा असुरक्षित महसुस गर्न थालेकी छु । मुम्बई पुलिसप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ ।’
कलाकार प्रशान्तसिंह राजपुतको आत्महत्याको घटना मुम्बई पुलिसले राम्रो छानबिन नगरेको भन्दै सिबिआईलाई जाँच गर्न दिन जनस्तरबाट माग भएको थियो ।
कंगनाले ‘असुरक्षित महसुस गर्न थालेको’ भनेपछि शिवसेना नेता तथा राज्यसभा सदस्य सञ्जय राउतले ‘असुरक्षित लाग्छ भने मुम्बईमा नबसे भो नि’ भन्ने ओठे जवाफ फर्काएका थिए ।
त्यसपछि कंगनाले ‘मुम्बई पिओके वा तालेवान शासन भएको ठाउँ त हैन होला’ भन्दै निक्कै कडा प्रतिक्रिया गरेकी थिइन् । पिओके भनेको पाकिस्तान अकुपाइड कश्मिर हो । कंगनाको यो भनाई पछि महाराष्ट्र गृहमन्त्री अनिल देशमुख र सञ्जय राउत झनै रिसाएका थिए ।
शिवसेना निकट महिला संघले सडकमा कंगनाको पोष्टरमाथि चप्पल हिर्काउने कार्यक्रम गरेको थियो । शिवसेना नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा कंगनाविरुद्ध मनपरी लेखेका थिए । सञ्जय सिंहले एक पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘हरामखोर लडकी’ र ‘तुम्हारी बाप ले आयो’ भन्दै गाली गरेका थिए ।
गृहमन्त्री अनिल देशमुखले कंगनालाई ‘महाराष्ट्र नआउन र आए प्रक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिने’ धम्की दिएका थिए । कंगना अहिले घर गएकी छन् । उनी हिमाञ्चल प्रदेशको बाम्बला नगरकी बासिन्दा हुन् । सञ्जय राउत र अनिल देशमुखको धम्कीपछि भिडियो र ट्वीटरमार्फत् कंगनाले श्रृंखलावद्ध जवाफ फर्काएकी छन् ।
एक भिडियोमा उनले भनेकी छन्– ‘सञ्जयजी मलाई अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता छ । मलाई मेरो देशको कुनै पनि स्थानमा जाने स्वतन्त्रता छ । म स्वतन्त्र हुँ ।’
ट्वीटमा उनले लेखेकी छन्, ‘तपाई को हो मलाई महाराष्ट्रलाई प्रेम वा घृणा गरेको सर्किफिकेट दिने ? तपाईले कसरी यो थाहा पाउनु भो कि तपाई मभन्दा धेरै महाराष्ट्रलाई माया गर्नु हुन्छ । महाराष्ट्र कसैको बाउको हैन । महाराष्ट्र तिनीहरुको हो जसले मराठी गौरवलाई स्थापित गरेका छन् । म खुलेआम भन्छु हो म मराठी हुँ, हेरौं म पनि मेरो कसले के उखाल्दो रैछ ?’
कंगनाले अझ थपेकी छिन्, ‘मैने इस्लाम डोमिनेट इन्डष्ट्रीमा आफ्नो ज्यान र करिअरको बाजी लगाएर शिवाजी महाराज र रानी लक्ष्मीबाईमामथि सिनेमा बनाए । आज महाराष्ट्रका यी ठेकदारहरुलाई सोधौं तिनीहरुले महाराष्ट्रका लागि के गरे ।’
रंगनाले सन् २०१९ मा ‘मनिकर्निकाः द क्वीन आफ झाँसी’ नामक सिनेमा बनाएकी छन् । यो सिनेमा मराठा ऐतिहासिक गौरवमा आधारित छ । महाराष्ट्रीहरु आफूलाई मराठा साम्राज्यको उत्तराधिकार ठान्दछन् । त्यस साम्राज्यका पराक्रमी महाराज ‘शिवाजी छत्रपति महाराज’ को नामबाट ‘शिव सेना’ पार्टी गठन गरिएको हो ।
स्वतन्त्र भारतमा बाल ठाकरेले ‘शिव सेना’ गठन गर्दै मराठा राष्ट्रवादी भावनालाई पुनर्जागृत गरेका थिए ।
कतिपय पत्रकारले भने यो लडाईलाई ‘शिवसेना’ भर्सेस ‘भापजा’ को लडाईका रुपमा हेरेका छन् । एकथरी सञ्चार माध्यमले कंगनालाई भाजपा समर्थकको रुपमा चित्रण गरेका छन् । उनलाई राजनीति गर्ने भए खुलेर गर्न समेत चुनौति दिइएका छन् ।
महाराष्ट्रमा लामो समयसम्म सहकार्य र गठबन्धनमा रहेका शिव सेना र भाजपा गत विधानसभा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि अलगअलग भएका थिए । अहिले शिवसेनाले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेसको समर्थनमा गठबन्धन सरकार चलाई रहेको छ ।
शिव सेना नेता तथा बाल ठाकरे पुत्र उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री छन् । भाजपा भने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ ।
कंगनालाई भाजपाले उचालिरहेको छ भन्ने भनाईको खण्डन गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘भाजपाले मलाई दुईपटक टिकट अफर गरेको हो, मैले नै नलिएकी हुँ । मेरो लोकप्रियता र वार्षिक आम्दानी कुनै मन्त्री वा राजनीतिज्ञको भन्दा कम छैन ।’
पछिल्लो ट्वीटमा उनले भनेकी छन्, ‘धेरै मान्छे मलाई भन्दैछन् कि तिमी मुम्बई नआऊ । आयौ भने सडकमा भीडले ढुङ्गा र रड हानेर तिम्रो हत्या गर्न सक्दछ । तर म सेप्टेम्बर ९ मा मुम्बई आउँछु । कसैसँग ताकत छ भने मलाई रोकेर हेर्नु ?’
सन् २००६ को ‘ग्याङगैस्टर’ बाट ठूलो पर्दाको सिने यात्रा शुरुवात गरेकी कंगनाले ‘वे लम्हे’, ‘लाइफ इन मेट्रो’, ‘क्रिस ३’, ‘क्वीन’ जस्ता दर्जनौं चर्चित तथा व्यवसायिक रुपमा सफल सिनेमामा अभिनय गरेकी छन् ।
३३ वर्षीया अविवाहित कंगना पछिल्लो पुस्ताकी सफल बलिउड अभिनेत्री मानिन्छिन् ।
फिचर पोस्ट, ब्लग, विशेष, विश्व
काठमाडौं, १२ कात्तिक । सत्ताधारी दल नेकपाभित्रको विवाद सतहमै आएपछि अन्ततः पार्टीका सबै कमिटी र संसदीय दलमा टाउको गन्ने अवस्था...
काठमाडौं, १२ कात्तिक । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल कुनै पनि मौसमी प्रणाली उल्लेखनीय रुपमा सक्रिय छैन । अहिले प्रदेश...